Dagaal Loogu Jiro Toni Kroos, Varane Oo Mourinho Dartiis U Diidaya Man Utd Iyo Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Ay Wargeysyada Ingariiska Ka Qoreen Suuqa Kala Iibsiga. | Haqabtire News
Dagaal Loogu Jiro Toni Kroos, Varane Oo Mourinho Dartiis U Diidaya Man Utd Iyo Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Ay Wargeysyada Ingariiska Ka Qoreen Suuqa Kala Iibsiga.
Maalin wanaagsan meel walba oo joogtaan akhristayaasheena sharafta leh, waxaan idiin soo gudbineynaa sida aad inooga barateen maalin walba wararkii ugu waa weyn ee ay qoreen wargesyayda maanta oo Khamiis ah, xuquuqda iyo sugnaanshaha wararkaan waxaa ka mas’uul ah wargeysyada magacooda uu ku hor xusan yahay.
Manchester City ayaa kula dagaalami doonta Paris Saint-Germain iyo Manchester United saxiixa xiddiga Real Madrid Toni Kroos.
John Terry ayaa la filayaa inuu isaga tago Chelsea xagaagan.
Jurgen Klopp ayaa laga yaabaa inuu da’ yarka Liverpool Sergi Canos uu siiyay fursad uu kulankii ugu horeysay ku ciyaaro kulanka West Brom ee isbuuca soo socda.
Xiddiga diirada u saaran Manchester City Ilkay Gundogan ayaa qandaraas cusub ka helay kooxdiisa Borussia Dortmund.
Koox Shinees ah ayaa la wareegeyso maalmaha soo socda kooxda Aston Villa iyagoo ku iibsanaya 75 milyan ginni, waxaana ay taasi albaabka u fureysa in agaasime Damiel Camolli inuu ku soo laabto kubada cagta Ingariiska.
Roberto Martinez ayaa loo soo bandhigay labo shaqo oo ugu banaan dalka Spain isagoo ku dhow in laga ceyriyo shaqadiisa Everton.
Dhaawaca Danny Welbeck ayaa sabab u noqon kara in Arsenal ay sarre u qaado doonisteeda weeraryahanka Juventus Alvaro Morata.
Xiddiga ku hungoobay Chelsea Radamel Falcao ayaa xaqiijiyay inuu ku laabanayo kooxda Faransiiska ee Monaco ka dib markii loo sheegay inaysan u baahneyn Blues.
Arsenal ayaa dooneysa inay dhameystirto saxiixeeda xiddiga Borussia Monchengladbach Granit Xhaka ka hor inta uusan bilaabanin Euro 2016, iyagoo doonaya inay si dhakhso ah u galaan suuqa kala iibsiga.
Manchester City ayaa la wareegeysa da’ yarka kooxda Brentford Ian Carlo Poveda.
Kooxda Liverpool ayaa loo soo bandhigay dhiirogelin ku aadan doonistooda Ousmane Dembele iyadoo kooxda Jurgen Klopp ay saxiixiisa kula tartameyso kooxda Borussia Dortmund iyadoo da’ yarkaan Faransiiska ee kooxda Rennes lagu heli karo qiimo gaaraya 28 milyan ginni.
Xaalada Alexis Sanchez ee Arsenal ayaa waxaa qiimeyneysa kooxda Juventus iyadoo Arsene Wenger laga yaabo in lagu qasbo inuu lacag kaash ah siisto.
Xiddiga Real Madrid Raphael Varane ayaa iska diidi doona inuu u dhaqaaqo Manchester United haddii Jose Mourinho uu bedelayo Louis van Gaal xagaagan.
Arsenal ayaa u laaban karta doonisteeda weeraryahanka Marseille Michy Batshuayi ka dib markii Danny Welbeck la sheegay inuu maqnaanayo sagala bilood.
Manchester United ayaa ka mid ah kooxaha ugu cadcad saxiixa daafaca kooxda Chelsea John Terry.
Tababare Pep Guardiola ayaa ceyrsanaya goolhayaha kooxda Real Sociedad Geronimo Rulli laakiin goolhayaha reer Argentina ayaa kaliya kursiga keydka u fadhin doona Joe Hart.
Arsene Wenger ayaa 80 milyan ginni ku doonaya Granit Xhaka, Alvaro Morata iyo Henrikh Mkhitaryan si uu u dejiyo jamaahiirta Arsenal.